UMelinda: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	23 Matshi 2020	• 10 Comments
Ngexesha leReddit 'ubuza into oyifunayo', uBill Gates wabuzwa umbuzo malunga nobhubhani we-covid-19. Impendulo yakhe yayityhila. Uthe, "Ekugqibeleni, siza kuba nezatifikethi zedijithali ezibonisa ukuba ngubani na osele elungisiwe okanye wavavanywa kwaye ngubani ofumene ugonyo." Ngezo zatifikethi zedijithali, iBhili iyakwazi […]
UBill Gates ngo-2017: "Ubhubhane olandelayo unokuthi wavela kwiscreen sekhompyuter"
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	28 Januwari 2020	• 9 Comments
Hayi, ayilo iyelenqe lentsholongwane le-corona! La ngamazwi kaBill Gates kwinkomfa yezokhuseleko eMunich ngoFebruwari ka-2017: "Esi sifo singemva nje singenzeka nje kwiscreen sekhompyuter yomntu onobunqolobi ofuna ukusebenzisa ubunjineli bemfuza ukwenza inguqulelo yentsholongwane yengxibongo." Kutheni uGates enokuthi ingxelo enjalo […]
Umnyhadala wokwenza intsholongwane ka-corona kwiiveki ezi-201 ngaphambi kokuqhambuka, uxelisa imeko efanayo
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	27 Januwari 2020	• 11 Comments
Nge-18 ka-Okthobha ka-2019 kwenziwa intsholongwane ye-corona virus, ebizwa ngokuba yi-tukio ngo-201. Kuyaphawuleka ukuba le ndlela yokulinganisa isebenza ngokuthe ngqo imeko esikuyo ngoku ekuqalisweni kokuqala kwesixeko saseTshayina eWuhan. Kwinqaku lam langaphambili […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	23 Januwari 2020	• 73 Comments
Intsholongwane ye-corona evele ngequbuliso eTshayina kwingingqi yeWuhan kwaye kuthiwa yaqala kwintengiso yezilwanyana igqunywe yilungelo elilodwa lesiNgesi. Le yinombolo yepatent ye-EP3172319B1 ephuhliswe ngu-Erica Bickerton kwiziko lePirbright eSurrey, eNgilane. IZiko lePirbright (iBill & Melinda Gates) lenza izifundo ngezifo ezosulelayo kwizilwanyana zasezifama. […]
Isifo sengculaza seZika sivalela isitofu sokugonywa kweTdap eBrazil? Phinda ubeke igama iBill Gates liphuma
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	30 Januwari 2016	• 7 Comments
Ekwindla ka-2014, uMphathiswa wezeMpilo waseBrazil wabhengeza ukuba isitofu esitsha sokuthi i-Tdap yayiya kuba yinto enyanzelekileyo kubo bonke oomama abalindelekileyo njenge-2015. Iinkcukacha ngoku zibonisa ukuba zonke iintsana ezineziphene zokuzalwa zachonywa ngeTdab. Ukufana kwinqanaba lokusungula isitofu seTdap kunye nokunyuka kwe [...]
I-Zika iqhekeza iBrazil ngenxa yobuncwane bokuguqula izityalo, igama elithi Bill Gates likhupha
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	29 Januwari 2016	• 7 Comments
Lapho sasiqala ukufumana intsholongwane ye-Ebola enokubangela ukugqabhuka kwehlabathi jikelele, kukho i-virus yeZika. Iintsholongwane ze-agciwane ziza kuvela kuma-u-Aedes. Ezi zizinyosi ezithwala i-dengue virus. I-Dengue, eyaziwa nangokuthi i-dengue fever, isifo esibangelwa yi-tropical disease esibangelwa yi-virus ye-dengue. [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.475.354
UDavid Icke eLondon yangempela yevidiyo: Ngaba i-Icke yeyokwenyani okanye yeyokwenyani okanye ngaba inyani idityaniswe nomgibe we-booby?
SandinG op UDavid Icke eLondon yangempela yevidiyo: Ngaba i-Icke yeyokwenyani okanye yeyokwenyani okanye ngaba inyani idityaniswe nomgibe we-booby?
UValalarevolution op Inkomfa yabezindaba uMark Rutte kunye noHugo de Jonge: uluntu olunesiqingatha semitha kunye nokungeniswa kweapps
Ikhamera 2 op ICorona Crisis: Ingathabatha ukuya kwiminyaka emi-2 ukuya kweli-3 ukuphuma kokuvalelwa ngaphandle kokuba ulandelele kwangoko kunye neapps
UMartin Vrijland op Inkomfa yabezindaba uMark Rutte kunye noHugo de Jonge: uluntu olunesiqingatha semitha kunye nokungeniswa kweapps